Amakhukhamba akhula endaweni yokushisa | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Amakhukhamba akhula endaweni yokushisa
Izici zika ukhukhamba ezikhulayo endaweni yokushisa
Uma uhamba emgwaqweni kunoma yimuphi indawo ye-suburban, cishe ungathola izakhiwo ezingavamile zefilimu, ingilazi noma i-polycarbonate. Sekuyisikhathi eside abantu basebenzisa lezi zakhiwo, ezibizwa ngokuthi izithombo zokugcina izithombo, ukuze bakhule izinhlobo ezahlukene zezitshalo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Lo mbono uzwakala uzama, kodwa kudinga isikhathi esiningi, umzamo futhi, ngeshwa, imali.
Indlela yokudla ukhukhamba ebusweni abamba ukushisa
Ngenxa yokungathobeki, ukukhula okusheshayo nokukhukhamba okuvuthwa kuboniswa cishe kuzo zonke izivande, nakwamanye amazwe. Njengoba lokhu kungomunye wemifino ekhula ngokumangalisayo endlini yokushisa, ingenye yeyokuqala ukungena ekudleni kwethu emva kwebusika eside ngaphandle kwamavithamini. Ikhukhamba ngokwayo, ngokungafani nezinye izitshalo zemifino, ayikwazi ukuziqhayisa umcebo wezakhi kubantu.
Ama-ovari amaqokhamba aphuzi: izizathu
Inkathi yokulima ayiyona injabulo kuphela yokuvuna, kodwa futhi kukhona ukuhlupheka. Cabangela ukuthi kungani amakhukhamba ephuzi ku-greenhouse nokuthi kufanele akwenze ngani. Ukuntuleka komanyolo emhlabathini Inhlabathi ebusweni obuncithakalo ingaba mpofu ezinhlanganweni zamaminerali, okubangela ukuphuza. Ngokuntuleka kwe-nitrogen sheet kuqala kukhanya, bese ushintsha umbala we-vein yakhe nazo zonke izikhala phakathi kwazo.
Ukukhukhamba kwamakhukhamba kusuka emanzini okushisa
Amakhukhamba akhula endaweni yokushisa evela kumbewu, kukhona ingozi yokuthola izimbali eziningi ezingenalutho. Kodwa-ke, abalimi abaningi baphendukela kule ndlela ngoba isikhathi esincane esidla uma kuqhathaniswa nendlela yokutshala. Ukuze uthole isivuno esicebile futhi unciphise izingozi, kubalulekile ukunamathela ezincomo ezithile, kuqala ngokukhethwa kwezinhlamvu nokulungiselela kwabo.
Indlela yokubhekana nokushisa kwamakhukhamba kubamba lokushisa
I-Wilting amaqabunga iyinkinga evame kakhulu kubalimi abakha ukhukhamba ezindaweni zokugcina izithombo. Kusukela esihlokweni sethu, uzothola izizathu zokuthi kungani lokhu kungenzeka, kanye nendlela yokulwa nalesi simo kanye nokuvinjelwa kwayo ukuze ukhukhamba ube nempilo futhi ithwale izithelo kahle. Ukuqothulwa ngenxa yezifo Nakuba ukhukhamba isitshalo esingenakuzithoba, esinye sezizathu zokuthi kungani amakhokhamba ephela endaweni yokubamba ukushisa kuba khona kwezifo.
Amakhukhamba aphuza kahle ku-greenhouse
Amakhukhamba akhula adinga ukulinganisela kokushisa kwenhlabathi nomoya, kanye nokulawula amazinga omswakama. Lesi siko semifino sithanda ukukhanya nokushisa okukhulu, ngakho ukuchelela kahle kwamakhukhamba yisinyathelo esibaluleke kakhulu ekunakekeleni. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ekutshaleni imifino ezindaweni zokugcina izithombo. Abaningi balimi nabalimi, ngenxa yezimpawu zezulu sezwe lethu, basebenzisa izithombo zokugcina zokugcina izitshalo ze-polycarbonate, ngakho-ke, ukuze bathole ukuvunwa okucebile, kubalulekile ukutadisha imithetho eyisisekelo kanye nezici ezikhethekile zokunisela ukukhushulwa.
Indlela yokubopha ukhukhamba endaweni yokushisa
Ikhukhamba evamile iyimifino yonyaka, ebonakala ngemivimbo eminingi, ngezinye izikhathi ifinyelela ubude obungaphezu kwamamitha amabili. Emasimini, izibhamu zisakaze embhedeni, isitshalo sinokukhanya okwanele, ngakho ubude bemivimbo nemibimbo yabo akubalulekile. Esikhathini sokushisa, ukukhanya ngeke kube ngokwanele kulezi zitshalo, amaqabunga azophendulela, amaqabunga azoqala ukubola, kanti izithelo zizophuzi, ziboshwe futhi ngeke zigcwalise.
Kungani amaqabunga amakhukhamba aphuzi futhi singasondla kanjani izitshalo ukuze siqede imbangela
Lapho ikhukhamba ishiya, nje izolo i-luxury futhi iluhlaza okwesibhakabhaka, ngokuzumayo yaqala ukujika, udinga ukuthatha izinyathelo eziphuthumayo ukusindisa lesi sitshalo. Lesi yisifo sesifo esibi kakhulu, ngakho-ke asikwazi ukunakwa. Cabangela ukuthi yini eyabangela izinguquko ezingathandeki embala ohlaza okwesibhakabhaka samakhukhamba nendlela yokubhekana nayo.
Indlela yokwenza kahle ukhukhamba ku-abamba ukushisa
Njengoba banqume ukutshala imifino noma izithelo ngokwabo, umlimi wezitshalo othanda ukubhekana nesimo sezulu ubhekene nezinhlayiya eziningi nezimfihlo ezidinga ukufundwa nokuziqonda, ngoba ubungakanani nesimo sesitshalo sincike kuzo. Futhi kulesi sihloko sizofunda ukuthi singayithuthukisa kanjani lezi zinkomba uma sikhula ukhukhamba ezindaweni zokugcina izithombo.